Ndị ọrụ 300 hapụrụ Job na ọdụ ụgbọ elu Istanbul | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulNdị ọrụ 300 hapụrụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Istanbul
02 / 11 / 2019 34 Istanbul, General, Ụgbọelu, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Onye ọrụ ọdụ ụgbọ elu Istanbul hapụrụ ọrụ
Ndị ọrụ ọdụ ụgbọ elu Istanbul, arụghị ọrụ n'ụtụtụ a mgbe ogbugbu ahịa ahịa ụnyaahụ gasịrị. Ihe dị ka ndị ọrụ 300 gbakọtara na ebe a na-ahapụ ọrụ ọrụ, kwuru na ha agaghị ahapụ ubi ahụ ruo mgbe eburu usoro ndị dị mkpa.
Dị ka Evrensel si kwuo, Mehmet Aydin dị afọ 18, onye na-arụ ọrụ dị ka onye na-ahụ maka ikuku na-ewu Berko, onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ DHL na ọdụ ụgbọ elu Istanbul, nwụrụ ụnyaahụ site na ịdaba na mkpanaka nke igwe mbugo. Ndị ọrụ ibe ya kwuru na a ga-akpọ Mehmet Aydın, onye bịara ọrụ na nwanne nne ya si Van Erciş otu izu ka e mesịrị, na ha na-arụ ọrụ oge ọrụ na ebe a na-ewu ụlọ ahụ, na enweghị ọkụ na ọkụ na-aga n'okporo ụzọ na ha ga-eji ọkụ ekwentị.
Ndị ọrụ na-ekwu na anaghị esite na nchekwa ahụ pụọ na ebe a na-ewu ụlọ ahụ, na-agagharị n'ọchịchịrị nke okporo igwe mbido ma ọ bụ kwagide, na-ekwupụta ntinye nke mgbede Mehmet Aydın n'ọchịchịrị nke ajị ahụ na-adaba na oghere ịma mma wee daa na ebe a na-ebuli elu, o kwuru.
Ndị ọrụ na-egosi etu ha siri daa n’elu steeti ahụ n’enweghi ọkụ, enweghị mgbọ, ka o kwuru. Ndị ọrụ chọrọ ka ọkụ na mkpịsị ọkụ.
Ha agaghị arụ ọrụ ọ gwụla ma ewere usoro ruo mgbe 4 NOVEMBER
Ihe dị ka ndị ọrụ 300 na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Istanbul mereghachi omume igbu ọchụ azụmahịa site na ịkwụsị. 4 kwuru na ha agaghị anọ n'ọrụ ahụ belụsọ na ewepụtara usoro ndị dị mkpa ka ọ na-eru na Nọmba Mọnde , Ọbụna na ihu igwe a, anyị na-arụ ọrụ na ọnọdụ adịghị mma. Ihu igwe na-ajụ ezigbo oyi na onye na-ebubata ya na ụlọ ọrụ nne na nna kwuru na ha enweghị ike ikesaa uwe. ”
Newgwọ Maka Airportgbọelu ụgbọ elu Istanbul ọhụrụ anaghị akwụ ụgwọ…
Lectnakọta Ihe mkpuchi Rusty Broken na ekpe site na TCDD…
Ndị ikwu nke ndị nwụrụ n'ihe ọghọm okporo ụzọ Çorlu dị n'okporo ụzọ ụgbọ oloko…
Ememe ekeresimesi Europe nke hapụrụ Bursaray enweghị ngbanwe,…
Oge mbu nke Kardemir na Ndeputa Production…
Kardemir na-ahapụ 2017 Afọ na Ndekọ Ihe
Ebubo na-ewe ụbọchị nke anọ na İZBAN
IZBAN Tiri 7. Ọ hapụrụ ụbọchị ya
Ndị na-eme egwuregwu na Mersin ekpeziri nke atọ n'ụbọchị
Ogwe okporo ụzọ Bursa T2 na-ahapụ ụmụ amaala n'ọnọdụ ọnọdụ siri ike
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè French amaghị
300 ruo taa na Baku Tbilisi Kars Railway Line Bugün
Plerụ Ọrụ Triple Triplets Na Oge izizi US Dün
Llọ ọrụ DHL